फुटको संघारमा डबल नेकपा ? - सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
फुटको संघारमा डबल नेकपा ?
काठमाडौं । आन्तरिक कलह अस्वस्थ रुपमा चुलिदै जाँदा सत्तारुढ डबल नेकपा फुटको संघारमा पुगेको छ । जारी स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी सचिवालयका पाँच सदस्यसहित अधिकांश स्थायी समितिका सदस्यहरुले एकस्वरमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा मागेपछि नेकपा फुटको संघारमा पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट राजिनामाको दबाब बढेपछि ओलीले बुधबार परामर्शका लागि भन्दै मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएका छन् ।
पार्टी भित्रैबाट सरकारको आलोचना भइरहेको बेला ओलीले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुसँग परामर्श गर्न लागेका हुन् । परामर्शका लागि मन्त्रीहरु र आफू निकट स्थायी समितिहरु बिहान ७ बजेदेखि नै बालुवाटारमा भेला भएका छन् ।
सैबीच, निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गर्न निवेदन परेको छ । मोरङकी सन्ध्या तिवारीको अध्यक्षतामा एमाले पार्टी दर्ताका लागि आइतबार निवेदन परेपछि पार्टी फुटको विश्लेषणले सघन चर्चा पाएको छ ।
उक्त विषयबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आजको स्थायी कमिटी बैठकको सुरुआतदेखिनै चर्काचर्की भएको थियो । बैठकमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीकै निर्देशनमा नेकपा एमाले ब्युँताउने निवेदन दर्ता भएको दाबी गरेका थिए ।
स्थायी कमिटी बैठकका बहुमत सदस्यहरुले राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओली संकटमा परेका छन् । उनले मंगलबार स्थायी कमिटी बैठक अगाडि र पछाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग एकै दिन दुईपटक परामर्शसमेत गरेका छन् ।